နှစ်ကူး: July 2007
နှစ်ကူး ရဲ့ Blog လေးကို လာလည်ကြတဲ့ ဘလော့မောင်နှစ်မတွေ အားလုံးကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း အိမ်တွေကို အလည်မလာဖြစ်တာက ကျန်းမာရေးသိပ်မကောင်းတဲ့ ကွန်ပျူတာကြောင့်လေ။
ကွန်ပျူတာလေး ချောင်းဆိုး ရင်ကျပ် ဖြစ်နေတာတော့ ကြာပီ.. =P ။ ဒီနေ့မှပဲ နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ ကွန်ပျူတာကို ဆေးခန်းသွားပြလိုက်တယ်။ စစချင်းပျက်ကတည်းက သိမ်းထားတာလေးတွေ backup လုပ်ပီး မြန်မြန်သွားပို့မှလို့ပဲ ဆိုပေမယ့် နှစ်ပတ်သာ ကျော်သွားဒယ်… မလုပ်ဖြစ်ဖူးး..။ ဒီနေ့တော့ မဖြစ်ချေဖူးး ဆိုပီး backup တောင်မလုပ်နိုင်ဘဲ မြန်မြန်ပြေးရဒယ်..။ Blog show နေ့က ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေနောက်ရက် ပို့ပေးမယ်လို့ အာမခံခဲ့တာလေ… ဟိ…ဟိ.. မျှော်နေမှာစိုးလို့ ဆိုင်ကို ပြေးရတာပေါ့။ ( မြလွှာ ၊ ရတနာ နဲ့ ကိုထူးထူး တို့ရေ… သီးခံပေးနော်…။ ) ဆိုင်ကိုရောက်တော့ Graphic Card ကြောင်တာတဲ့…။ format ချဖို့မလိုဖူးးဆိုမှ ဟင်းးး ချနိုင်တော့တယ်..။ ဒီလို ဖြစ်တာ ၂ ခါ ရှိပီ။ ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲတော့ သိဖူးး။ ကွန်ပျူတာ သုံးနေတုံး ခဏခဏ ဟန်းဟန်းသွားတဲ့ သွားတာ။
Blog Show နေ့ကတော့ Camera တွေ ကိုယ်စီ ကိုယ်စီနဲ့ တစ်ယောက်မှ မလွတ်ရအောင် ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ပီး အားပေးခဲ့ကြတယ်။ သူ့ကို ကိုယ်ရိုက် ၊ ကိုယ့်ကိုသူရိုက် အပြိုင်နွှဲခဲ့ကြတယ်။ မထင်မှတ်ဘဲ ဘလော့ဂါတွေ စုံစုံညီညီ လာကြလို့ အားလုံးပျော်ခဲ့ကြတယ်၊ ပြီးတော့ အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ ပွဲလေးတစ်ခု ပီးသွားခဲ့တယ်။ဘလော့သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးပဲ ရင်းနှီးဖော်ရွေ ကြတယ်။ စည်းလုံးညီညွတ် ကြတယ်။ အဲဒီနေ့က မလာဖြစ်တဲ့ သူငယ်ဂျင်းလေးတွေလဲ... နောက်လုပ်မယ့် Blog Day ကို တော့ လက်မလွှတ်စေနဲ့တော့နော်... :P
Posted by နှစ်ကူး at 7/26/2007 09:25:00 AM0comments
ဒီပုံလေးကတော့ ဆရာစသင်တဲ့နေ့မှာပဲ စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ ပုံတစ်ပုံကို စာမေးပွဲစစ်သလို ချက်ခြင်းဆွဲခိုင်းလိုက်တော့ … နှစ်ကူးတစ်ယောက်လည်း ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ ဆွဲလိုက်တာ ပုံကမတူဖူး ဖြစ်သွားတယ်။ ဆရာကတော့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ Texture ပိုင်နိုင်မှုရှိမရှိကို ကြည့်တာ၊ ပုံတူမတူ ကြည့်တာမဟုတ်ပါဖူးတဲ့။ အဲဒီတော့မှ တော်ပါသေးရဲ့လို့ စိတ်အေးသွားတော့တယ်။
ဒီ နှစ်ကူးတစ်ယောက်နှယ် Texture တို့ Tone တို့ကို ခဏခဏပြောပြောနေတယ်..။ အဲဒါ ဘာကြီးလဲလို့ မေးရင် ပုံလေးနှစ်ပုံခြင်းစီကို ယှဉ်ပြလိုက်မယ်နော်။ အလင်းအမှောင် ၊ အဖိအဖော့ ၊ အနိမ့်အမြင့် ခွဲထားခြင်းမျိူးပဲ။ ပန်းချီမှာကလည်း သူတို့ပါမှ ပွဲစည်တာ။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ပုံဆွဲပီးရင် အလိုမျိုးမဲမဲကြီးတွေ လိုက်ဖြည့်ထည့်တာကို လှဒယ်လို့ မထင်ဖူး။ အသားမည်းသွားအောင် လုပ်တာနဲ့တူဒယ်လို့ မြင်တာ။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပီး နှစ်ကူးဆွဲထားတဲ့ ပုံတစ်ပုံကို ပြမယ်။ အဲဒီပုံက ဆွဲထားပီး Tone မဖြည့်တတ်လို့ ဒီတိုင်းပစ်ထားတာ။ အရင် ခဲပန်းချီအကြောင်း post အဟောင်းမှာလည်း တင်ထားဖူးပီးသားပါ။ အခု နည်းနည်းတော့ ဖြည့်တတ်သွားပီမို့ ကိုယ့်ဘာကို Tone ခွဲပီး စမ်းကြည့်ထားတယ်။ မြည်းကြည့်အုံးနော်… :P ဒါပေမယ့် ကိုယ်တိုင်ခွဲထားတဲ့ Tone က perfect မဖြစ်လို့ ဆရာက ပန်းချီကားတစ်ချပ် နဲ့တူအောင် နည်းနည်းပြန်ပြင် ပြပေးလိုက်တယ်။ ကိုယ့်ဘာကိုယ် ဆွဲထားတုန်းက ပန်းချီကားနဲ့ သိပ်မတူဘဲ ကာတွန်းနဲ့ ပိုတူနေပီး.. ပြင်လိုက်မှ ပိုလှသွားသလိုဘဲ။ (ကိုယ့်ငါးချဉ် ကိုယ်မှ မချဉ်ရင် အဒူမှချဉ်မှာမှုတ်ဖူး.. :P )
ဒီပုံကလည်း မကျေပွဲပြန်နွှဲထားတာပဲ။ မတောက်တစ်ခေါက် Tone လေးဖြည့်တတ်လာတော့ ပန်းပုရုပ်ထုကို ပြန်ကြည့်ပီး ဆွဲထားတာလေ။ ဒါလေးဆွဲပီးတော့ သိလိုက်ရတာက အလင်းဆုံး Tone နားမှာ အမှောင်ဆုံးရှိတယ်။ ရေးချက်တွေကို လှဲလိုက်၊ ထောင်လိုက် ရေးခြင်း ( မျဉ်းမတ်၊ မျဉ်းစောင်း၊ မျဉ်းလဲ ) အားဖြင့် distance တွေကို လုပ်ယူရမယ်။ အဲဒီ distance လုပ်ခြင်းဟာ ကွန်တို သဘောပါပဲ။ အဲလို မတူညီတဲ့ ရေးချက်လေးတွေ ဖြည့်လိုက်တော့ နှာခေါင်းချွန်တဲ့ သူပုံဆွဲရင် နှာခေါင်းချွန်လာမယ်။ ပါးရိုးမို့တဲ့ သူပုံဆွဲရင် ပါးရိုးမို့မို့ တွေပေါ်လာမယ်။ မျက်လုံးအိမ်ခွက်နေသူရဲ့ ပုံကိုဆွဲရင် မျက်လုံးအိမ်ခွက်နေကြောင်း ပေါ်လွင်လာမယ်… စသဖြင့်ပေါ့လေ။ Tone ဖြည့်ထားတော့ ပုံကို ကြည့်ရတဲ့ အရသာချင်း နည်းနည်းကွာသွားတယ်..ဟုတ်?? ။ ဆရာက ပန်းချီစာအုပ်တွေ ထဲက သူများခွဲထားတဲ့ Tone တွေကြည့်ပီး လေ့ကျင့်တာ ရပ်လိုက်ပီး ကိုယ်ပိုင် ကိုယ့်ဘာကို မြင်တဲ့ Tone တွေ ဖြည့်ကြည့်ရမယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဘာကိုယ် ကိုယ့်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ် ဇိမ်ပြေနပြေထိုင်ဆွဲပီး Tone တွေ စိတ်ကြိုက်ဖြည့်တော့တာ။ ဗိုက်ဆာမှန်းတောင် သတိမရတော့ဖူး။ အဲဒီနေ့က ညနေစောင်းမှ ပြန်ဖြစ်တယ်။
ဒီပုံလေး နှစ်ပုံကလည်း perspective ( အနီးအဝေး ) သင်မဲ့နေ့က မသင်ခင် တစ်ရက်အလိုမှာ ကိုယ်နားလည်သလောက် အမြင်နဲ့ ပုံလေးတစ်ပုံ အိမ်မှာဆွဲခိုင်းလိုက်တယ်။ ( အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာ စာပွဲတစ်လုံးပါရမယ်။ မျက်နှာကျက် ပါရမယ်။ ဘေးနားမှာ ပြတင်းပေါက်လေးလဲပါရမယ် ဆိုပီး အိမ်စာပေးလိုက်တယ် ) ဘယ်ဘက်က ပုံလေးကတော့ အိမ်စာပေးလိုက်တဲ့ ပုံလေးပါ။ ညာဘက်ခြမ်းက ပုံလေးကတော့ နောက်ရက် သင်တန်းမှာ one point , two point တွေ သင်ပီးမှ ဆွဲထားတဲ့ ပုံပဲဖြစ်တယ်..။
one point ဆိုတာ မျဉ်းကြောင်းတွေက point တစ်ခုထဲမှာ ဆုံကြတယ်။ ယေဘူယျအားဖြင့်တော့ ပြိုင်နေတဲ့ မျဉ်းနှစ်ကြောင်းဟာ ဆုံမှတ်မရှိဘူးလို့ နားလည်ထားကြပါတယ်။ ပန်းချီမှာတော့ မျဉ်းကြောင်းတွေဟာ တစ်နေရာရာမှာ ဆုံကိုဆုံကြတယ်။ အစကတော့ ဆုံမှတ်မရှိဖူးလို့ သိထားတော့ ပထမပုံလေးမှာ မျဉ်းပြိုင်တွေကို မပြိုင်ပြိုင်အောင်ဆွဲထားတယ်။ အဲ… ဒုတိယပုံလေးမှာတော့ ဆုံမှတ်တစ်ခုကို ဗဟိုပြုပီး မျဉ်းကြောင်းလေးတွေ ဆွဲလိုက်တော့ အလိုလို distance တွေထွက်လာတယ်။ အဲဒီဆုံမှတ်ဟာ ကိုယ်ဆွဲနေတဲ့ ဧရိယာဘောင်လေးထဲမှာပဲ ရှိနိုင်သလို၊ ဘောင်ကိုကျော်ပီး အပြင်မှာလဲ ဖြစ်နေနိုင်တယ်။ သေချာတာတစ်ခုကတော့ အဲဒီမျဉ်းကြောင်းတွေဟာ တစ်ခုထက်ပိုတဲ့ ဆုံမှတ်တွေမှာ ရှိနေကြတယ်ဆိုတာပဲ။ ဆရာက သူတို့ကျောင်းတုန်းက perspective စာမေးပွဲ အတွေ့အကြုံလေးပြောပြတယ်။ မြေကြီးပေါ်မှာ သံချောင်းစိုက်၊ အဲဒီသံချောင်းလေးမှာ အပ်ချည်ကြိုးလေးနဲ့ တန်းပီး ဆုံမှတ်လုပ်ကြတယ်။ အဲ…. အဲ့ဒီဆုံမှတ်တစ်ခုမှာပဲ အပ်ချည်ကြိုး ၂ ကြိုး ၃ကြိုး ဖြစ်နေတတ်တယ်တဲ့။ ဆုံမှတ်ကိုပဲ ရှယ်ယာလာခွဲကြတာလေ… အဟ..ဟ..ဟ..။ ဒါပေမယ့် ခုတော့ အဲလောက်ကြီး လုပ်ဖို့မလိုပါဖူး။ သဘောတရားလောက်ကိုသိပီး အဲဒီ သဘောတရားကို အခြေခံပီး လုပ်ရမှာ။ သီအိုရီတွေ ပိနေရင် သီအိုရီက ကိုယ့်ကိုတက်စီးသွားမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ idea ၊ feeling တွေကို အပြည့်အ၀ အသုံးချရမယ်။ ( ဒါတွေက ဆရာမှာတဲ့စကားတွေ။ နှစ်ကူးက သိလိုက်တာ လို့ ချီးကျူးမစောနဲ့ :P )။ ဒါပေမယ့် ခုတော့ မတူတူအောင် ဆွဲရတာ အရမ်းသဘောကျနေတာ။ ကိုယ်ဆွဲထားတဲ့ ပုံလေးကို သူများတွေက “ဟယ်… တူလိုက်တာ..” လို့များပြောလိုက်ရင် သဘောခွေ့ မနောခွေ့ပဲ…ဟိ…ဟိ..။ ကဲ… ဒီစာလေးဘေးမှာပါတဲ့ အနီးအဝေး ကိုရှင်းပြထားတဲ့ ပုံလေးကို ခဏတော့ ကြည့်လိုက်နော်။
ဒီပုံကတော့ Texture ပါတယ်။ ပန်းသီး၊ ငှက်ပျောသီး၊ စတဲ့ အသီးတွေရဲ့ သဘာဝကိုပေါ်အောင် ဆွဲရတယ်။ ( အယ်… တော်လိုက်တာလို့တော့ မထင်နဲ့အုံးနော်… အဲ့ဒါ စာအုပ်ထဲကပုံကို ကြည့်ပီးဆွဲထားတာ…. ဟဲ…ဟဲ… )
အင်း… ဒီပုံလေးလည်း တူတူပါပဲ ။ ပလက်စတစ်၊ စတီး၊ ဖန် ဆိုတဲ့ မတူညီတဲ့ အရာဝတ္ထုပစ္စည်းလေးတွေကို ပေါ်လွင်အောင်ရေးတာပဲ။ ဒီပုံလေးကတော့ ဆရာချထားပေးတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ထိုင်ဆွဲရတာ။ ဒီမှာ ထူးခြားတာက overlap ဆိုတာလေးပါလာတယ်။
ဒီ post လေးတွေကို စနေ၊ တနင်္ဂနွေ အပတ်စဉ် သင်တန်းကပြန်လာတိုင်း သင်ထားတာတွေကို ပူပူနွေးနွေး ပြန်တင်ရမှာ။ ဒါပေမယ့် အခု သင်တန်းချိန်က ပိုများလာတယ်။ ခါတိုင်းဆိုရင် နေ့လည် ၂ နာရီဆိုရင် နောက်အကျဆုံးဆင်းတာပဲ။ ခုနောက်ပိုင်း ညနေ ၅ နာရီ၊ ၅ နာရီခွဲမှဆင်းရတော့တယ်။ ဆင်းဆင်းချင်း နောက်သင်တန်းတစ်ခုကို ချက်ချင်းကူးရတယ်။ သင်တန်းနှစ်ခုကလည်း နေရာက တောင်နဲ့မြောက်။ နောက်တစ်ခုကူးရတဲ့ သင်တန်းက ပေးလိုက်တဲ့ အိမ်စာတွေ မပီးသေးလဲ ရှုံ့မဲ့မဲ့နဲ့ သွားရဒါပဲ။ ငယ်ငယ်တုံးကလို ဗိုက်နာလို့ ၊ ခေါင်းကိုက်လို့ sound reason ပေးလို့ နရတော့ဖူးးးး.. ။ အဲဒီတော့ မိုးမျက်နှာပဲမော့ကြည့်နေရဒယ်..။ မိုးရွာလို့ကတော့ သွားဖူးဆို သွားဖူးပဲ ( အရမ်းကြိုးစားတာပဲနော် …ဟိ..ဟိ..)
Posted by နှစ်ကူး at 7/04/2007 11:16:00 PM4comments
Gtalk chat window Background လုပ်ရအောင်
ဒီတစ်ခါ… Gtalk ရဲ့ Chat Window မှာ ကိုယ့်နှစ်သက်တဲ့ Background Image လေးထဲ့ပီး emotion လှလှလေးတွေ သုံးပီး စကားပြောရအောင်…။ သိပီးတဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်…။ ဒါပေမယ့် မသိသေးတဲ့သူတွေ အတွက်လည်း background လှလှလေးတွေရသွားအောင်လို့ ထပ်ပီး မျှဝေလိုက်တယ်။
ပထမဆုံး ဒီမှာ "Download" အရင်ယူပါ။ install လုပ်ပီးရင် ကိုယ့်ရဲ့ Gtalk Stetting မှာ ဒီလိုလေးဝင် change လိုက်ပါ။
Setting >> Apperance >> Chat Theme >> MyTheme
အဲလိုလေး change ပီးသွားရင် ဖွင့်ထားတဲ့ Gtalk Chat Window လေးတွေကို ပိတ်လိုက်ပီး ပြန်ခေါ်လိုက်ပါ။ Chat Window ကို ပိတ်ဆိုလို့ Gtalk ကနေ logout လုပ်ရတာမှုတ်ဖူးနော်… အင်းး… အဲဒါ တိပီးတားလဲ ဖြစ်မှာပါ.. ချရာကြီးလုပ်ဒါ မှုတ်ဖူးးနော်… တချိူ့က Chat Window ပိတ်ဆိုတာကို Gtalk ကနေ Logout လုပ်သွားကြလို့။
Chat Window လေး ပိတ်ပီး ပြန်ခေါ်ပီးသကာလ Background လှလှလေးတွေ ရတွားပါသတည်း…
သြော်… အဲဒီ Default background လေးတွေ မကြိုက်ဖူးဆိုရင်…
Start>> All Programs >> Dash >> MyTheme >> ChangeBackground ထဲကနေ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ ပုံလေးတွေ Browse လုပ်လိုက်ရင် ရတွားပါပီ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်တင်ချင်တဲ့ ပုံလေးရဲ့ Size က ကြီးနေမယ်ဆိုရင် ပုံအပြည့် ပေါ်မှာတော့ မဟုတ်ဖူးးနော်..။ size ကို နည်းနည်းတော့ ပြန်ညှိရမယ်။ အဲ Emotion လေးတွေ အတွက်လည်း မပူနဲ့
Start>> All Programs >> Dash >> MyTheme >> Help.pdf မှာ How to use Smiles? ဆိုတာလေးပါတယ်။ ရှာဖွေပီး ဖတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်။
မှတ်ချက်။ ။ MyTheme ဆိုတော့ ကိုယ်တင်လိုက်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ Background Theme လေးက ဟိုဘက်တစ်ခြားလူစီမှာ ပေါ်နေမှာတော့ မဟုတ်ပါဖူးး…။ အဲလို ဟိုဘက် ဒီဘက် အတူတူ မြင်ရမယ့် Background Software လေးကို တွေ့ရင်လည်း နှစ်ကူးကို ပြန်လက်တို့လိုက်ဦးနော်..။
အားလုံး Gtalk Chat Window Background နဲ့ Emotions လေးတွေ နဲ့ အတူတူ ပြုံးပျော်နိုင်ကြပါစေ။
နှစ်ကူးရဲ့ ခွဲဝေပေးခြင်းလေးကို ခဏနားဦးမည်။
Posted by နှစ်ကူး at 7/03/2007 02:02:00 PM 1 comments
တနင်္ဂနွေနေ့က ပံသုစန္ဒာ ပန်းချီပြခန်းမှာ မင်းကွန်းက ပန်းချီဆရာကြီး ဆရာရာဟုလာ ရဲ့ “ ရေးဖြစ်ခဲ့သမျှအချို့ ” ဆိုတဲ့ တစ်ကိုယ်တော် ပန်းချီပြပွဲလေးကို ရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြပွဲအတွက် ဖိတ်စာလေးကို စနေနေ့ကမှရတော့ သွားဖို့အတွက်တွေးပြီး ပျော်နေမိပေမယ့်လည်း တကယ်တမ်း သွားမယ့်နေ့ရောက်တော့ ပြပွဲခန်းမထဲကိုဝင်ဖို့ တွန့်ဆုတ်နေတယ်။ နေရာမစိမ်းပေမယ့် လူတွေစိမ်းနေတော့ သွားဖို့ ကြောက်စိတ်က အလိုလိုဝင်လာတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ဆိုင်ကယ်ကို ပြန်ကွေ့၊ အိမ်ကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြီး ကိုယ့်စိတ်ကို အားပြန်တင်းပြီး နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့တယ်။ ဆရာက မနက် ၉ နာရီ အရောက်လာပါလို့ မှာထားပေမယ့် တစ်ကယ်တမ်း ရောက်သွားတော့ ၁၁ နာရီတောင် ထိုးလုပြီ။ ဒီပြပွဲကို ပန်းချီဆရာ အတော်များများလည်း လာမှာဖြစ်လို့ ပန်းချီဆရာတွေ ပြောကြဆိုကြတယ့် ပန်းချီနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ဗဟုသုတတွေ ရနိုင်တာမို့ စောစောလာခဲ့ဖို့ မှာထားတယ်။ လူမကြောက်တတ်ပေမယ့် ၀င်သွားဖို့ တွန့်ဆုတ်နေလို့ မှာထားတဲ့ အချိန်ထက်လွန်နေတော့ ဆရာများအပြစ်တင် လေမလားဆိုပြီး လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်းပဲပေါ့ ပြုံးပြုံးကြီးနဲ့ လှမ်းကြိုပါတယ်။ အဲဒီတော့မှ သက်ပြင်းချနိုင်ပြီး ခပ်ကုပ်ကုပ်နဲ့ လွတ်နေတဲ့ခုံမှာ ၀င်ထိုင်လိုက်တယ်။ လာချပေးတဲ့ အအေးပုလင်းလေးကို သောက်ရင်းနဲ့ ဟိုတစ်စု၊ ဒီတစ်စု ကိုယ့်အုပ်စုနဲ့ကိုယ် စကားဝိုင်းဖွဲ့ နေသူတွေကို ဟိုကြည့် ဒီကြည့် လိုက်ကြည့်နေမိတယ်။ ကိုယ်သိတဲ့သူ တွေပါသလို၊ ကိုယ်မသိသေးတဲ့ သူအတော်များများလည်း ပါတယ်။ အခုလို စုံစုံညီညီ တစ်နေရာထဲမှာ ရောင်းရင်းတွေ ဆုံကြတော့ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေ ပြောနေကြသလို၊ အတွေ့အကြုံတွေလည်း နှီးနှောဖလှယ် နေကြတယ်။ နောက်လာဦးမယ့် ပန်းချီပြပွဲကြောင်းတွေ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားကို သွားပြခဲ့ရတဲ့ ပြပွဲအတွေ့အကြုံတွေ စသဖြင့် ပြော၍မကုန်ကြဖူး။ တစ်အောင့်လောက်ကြာတော့ အပေါ်ထပ်မှာပါ ပြထားတဲ့ ပန်းချီကားတွေကို ကြည့်ဖို့ တက်သွားခဲ့တယ်။ အပေါ်ထပ်ရောက်တော့ ပြပွဲရှင် ဆရာ ရာဟုလာ ကဧည့်သည်အချို့နဲ့ စကားလက်ဆုံကျ နေပါတယ်။ အပေါ်ထပ်မှာတော့ အောက်ထပ်မှာလောက် လူမများဖူး။ အပေါ်တက်လာခါနီး ဆရာ့ကို ပန်းချီကားတွေ ဓါတ်ပုံရိုက်ယူဖို့ ခွင့်တောင်းခဲ့တာမို့ ကားတစ်ချို့ကို ဓါတ်ပုံရိုက်ယူလာခဲ့ပါသေးတယ်။ ရိုးသားစွာ ၀န်ခံရရင် ဒီပန်းချီကားတွေရဲ့ သဘောတရား အနှစ်သာရကို အပြည့်အ၀ မခံစားတတ် သေးပါဖူး။ အရောင်တွေကို ကစားထားတဲ့ သဘောတရားလောက်သာ သိတာပါ။ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ပန်းချီကို စတင်လိုက်စားခါစမို့ ပုံတူ နှင့် ရှုမျှော်ခင်း
ဘက်ကိုသာ အားသန်နေခဲ့မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း Blog ကိုလာလည်တဲ့ သူတွေထဲမှာ ဒီလို ပန်းချီကားမျိုးလေးတွေကို စိတ်ဝင်စားသူတွေ ပါလာနိုင်တာမို့ ခံစားကြည့်နိုင်အောင် ပုံလေးတွေပါ တင်ထားပေးလိုက်ပါတယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အဲဒီနေ့မှာပဲ ရတနာပုံဈေး အပေါ်ထပ်မှာ ဓါတ်ပုံပြပွဲ ရှိတယ် သွားလိုက်အုံး လို့ ဆရာက သတင်းပေးတော့ အဲဒီ ပြပွဲကိုလည်း မလွတ်တမ်း သွားခဲ့သေးပါကြောင်း…..
ဆရာ ရာဟုလာ ကို ပန်းချီကားများနဲ့အတူ တွေ့ရစဉ်…
ဒါက နှစ်ကူးတို့ရဲ့ Teacher ဆရာစော…
ဒါပုံက ပြပွဲလာ ဧည့်သည့်များ
နှစ်ကူး၏ ပန်းချီပြပွဲသို့ တစ်ခေါက် ဤတွင် ခဏနားဦးမည်…
Posted by နှစ်ကူး at 7/02/2007 09:36:00 PM0comments